Ukuzivocavoca nokuphefumula kwe-Asthma - GAAPP
Ikhaya>Ukwelashwa Kwesifuba Nemithi>Ukuzivocavoca nokuphefumula kwe-Asthma
Ukuzivocavoca nokuphefumula kwe-AsthmaIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-24T12:43:03+01:00
Ukuvivinya ukuphefumula namasu akhethekile kungasiza ngezimpawu zesifuba somoya futhi kwandise amandla akho wamaphaphu, amandla nempilo yakho. Thola ukuthi izivivinyo zokuphefumula zingasiza kanjani i-asthma nokuthi yiziphi izinhlobo zokuzivocavoca i-cardio ezingcono kakhulu ku-asthmatics.
Ukuvivinya ukuphefumula kwesifuba somoya
Ngendlela efanayo nokuzivocavoca umzimba kunenzuzo enhliziyweni nasemisipheni yakho, izivivinyo zokuphefumula zingasiza amaphaphu akho. Nge ufuba, izindlela zakho zomoya zingancipha futhi zivuthe kube nzima ukuphefumula, ngakho-ke imishanguzo efana ne-inhalers, iyabekelwa ukusiza ukuvula imigwaqo yomoya nokwenza ngcono ukuphefumula.
Ngaphezu kwemithi, ucwaningo iphakamisa ukuthi izivivinyo zokuphefumula zingasiza ukwelashwa kwabantu abane-asthma, esiza ukuthuthukisa ukuphefumula nekhwalithi yempilo.
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zamasu okuphefumula asiza kakhulu i-asthmatics. Ezinye izivivinyo zisiza ekuqeqesheni ukuphefumula, ezinye zisiza ukukhulisa amandla emisipha yokuphefumula, kanti ezinye zithuthukisa ukuguquguquka kwekheji le-thoracic (imbambo yezinyosi).
Izindlela zokuphefumula zivame ukunconywa udokotela noma umtholampilo wesifuba somoya. Ukuqinisekisa ukuthi uthola izindlela zilungile futhi uzuza kakhulu kuzo, ezinye zifundiswa kangcono ngungoti.
Indlela yePapworth yasungulwa ngawo-1960 ePapworth Hospital futhi ihlanganisa izindlela zokuphefumula nezindlela zokuphumula. Izifundo bakhombisile ukuthi ukusebenzisa indlela yePapworth kungasiza izimpawu zokuphefumula futhi kuthuthukise izinga lempilo kubantu abane-asthma.
Indlela yePapworth ifundiswa ngama-physiotherapists futhi igxile ekufundeni ukuthi ungaphefumula kanjani ngokunensa nangokuzinza kusuka ku-diaphragm yakho (umsipha ongaphansi kwezimbambo zakho) nangamakhala akho.
I-diaphragm imisipha etholakala ngaphansi kwamaphaphu akho ekusiza ukuthi uphefumule. Ngokuphefumula okune-diaphragmatic, kugcizelelwa ukufunda ukuphefumula kusuka ku-diaphragm yakho, hhayi esifubeni njengoba abantu abaningi bevame ukwenza. Kanye nokusiza ukuqinisa i-diaphragm yakho, le ndlela yokuphefumula i-asthma ingasiza ekwehliseni izidingo zomoya-mpilo zomzimba wakho - njengoba imisipha ebuthakathaka kukwenze udinge umoya-mpilo - futhi usize wehlise umoya wakho wokuphefumula.
Ukuzama ukuphefumula ngokweqile, beka isandla esisodwa esifubeni sakho esingenhla kwesinye isandla usibeke esiswini. Donsa umoya ngamakhala akho bese unaka ukuthi isisu sakho sigcwalisa kanjani umoya. Okungcono isandla esiswini sakho kufanele sinyuke, kanti leso esifubeni sakho kufanele sihlale singanyakazi. Phefumulela ngaphandle komlomo wakho okungenani kabili noma kathathu ubude kunalokho okuhogelile, ngenkathi ugcina intamo namahlombe akho kukhululekile.
Ukuphefumula komlomo oqalekisiwe
Ukuphefumula komlomo oqalekisiwe inqubo esetshenziselwa ukusiza ukulawula ukuphefumula okuncane. Kuyindlela enhle yokwehlisa ukuphefumula, uqiniseke ukuthi umoya ngamunye owuphefumulayo uyasebenza kakhulu. Kuyasiza ukugcina imigwaqo yomoya ivuleke isikhathi eside, ukuze umoya-mpilo udluliselwe emaphashini bese kukhishwa isikhutha. Lokhu kusiza ukwehlisa izinga lokuphefumula futhi kunganciphisa ukuphefumula okuncane.
Zama ukuphefumula izindebe lapho ungazizwa uphefumula kancane. Donsa umoya kancane ngamakhala wakho uvaliwe umlomo. Bese uphefumula okungenani ubude obukabili ngomlomo wakho, nezindebe zakho zilandelwe - kube sengathi usuzoshaya ikhwela noma ushaye igwebu. Kungasiza ukubala njengoba uphefumulela phezulu.
Indlela yeButeyko yasungulwa ngusosayensi waseRussia uProfesa Konstantin Buteyko futhi iyindlela yokuphefumula kabusha. Kwakhe ucwaningo ithole ukuthi munye kuphela kubantu abayishumi abaphefumula kahle futhi abantu abaningi baphefumulela phezulu kakhulu, okwenza ingxube engafanele yegesi - i-oxygen ne-carbon dioxide - emzimbeni. Kungenzeka ukuthi ukuphefumula ngokujulile kungadala ukuphefumula okuncane.
Umqondo wale nqubo ukusiza abantu bafunde ukuphefumula ngendlela ejwayelekile, ukuze inhlanganisela enhle ye-oxygen ne-carbon dioxide ikhona emzimbeni. Kukufundisa ukuphefumula ngokunensa nangobumnene emakhaleni akho, kunasemlonyeni wakho. Lokhu kusiza ukugcina umoya ufudumele futhi unomswakama, okutholisa kakhulu ezindleleni zomoya ezizwela isifuba somoya.
Ukuzivocavoca kwe-Yoga kwesifuba somoya
Ukuphefumula kwe-yoga noma i-yogasana ye-asthma kubangelwa ukwenza kwe-yoga. Njengendlela yokuzivocavoca, i-yoga ifaka isidingo sokuphefumula kancane ngendlela elawulwayo ngenkathi ihamba, inwebeka futhi ibhalansi.
Ezinye izifundo zikhombisile ukuthi ziyakhuthaza Imiphumela futhi a ngcono ezimpawu zesifuba somoya ngemuva kokuba kwenziwe amasu okuphefumula e-yoga. I-Yoga ibuye ilungele ukusiza ukuqeda ingcindezi futhi, njengoba ingcindezi ingaba yisisusa se-asthma, kungakuhle ukuzama izindlela ezimbili zokuphefumula ze-yoga nokunyakaza kwe-yoga.
Isifuba somoya nokuphefumula izivivinyo
Ukuzivocavoca umzimba kungaba yinselele enkulu uma une-asthma, ikakhulukazi uma ukhathazekile kungahle kuqale ukuhlaselwa yisifuba somoya. Kepha ukuzivocavoca umzimba kuyazuzisa empilweni yakho yonke naku-asthma yakho. Eqinisweni, ukuzivocavoca njalo kungaholela ekuthuthukiseni izimpawu zakho ze-asthma, njengoba ukwandisa izinga lokushaya kwenhliziyo yakho kusiza ukuthuthukisa amandla akho wamaphaphu, ukukhulisa amandla nokunciphisa ukuphefumula.
Ngaphezu kwalokho, ukuvivinya umzimba njalo kungakusiza ugcine isisindo esinempilo futhi wehlise nengozi yokuhlaselwa yisifuba somoya. Ukuvivinya umzimba kukhipha namakhemikhali ebuchosheni bakho okuthiwa ama-endorphin, angakhuphula imizwa yakho futhi akusize uzizwe ungcono.
Izinhlobo ezinhle kakhulu ongazenza uma une-asthma yilezi:
Ukubhukuda - umoya ofudumele omanzi echibini lokubhukuda ulungele i-asthma. Ukubhukuda kungukuzivocavoca okuhle okunomthelela ophansi wenhliziyo okusiza wonke umzimba wakho ikakhulukazi imisipha oyisebenzisela ukuphefumula.
Ukuhamba - ukuhamba kuyindlela enhle yokuthuthukisa ukuqina komzimba wakho, ikakhulukazi uma udinga ukwakha kancane.
Ukuhamba ngebhayisikili - ukuhamba ngebhayisikili okungaguquki kungathuthukisa amazinga okunyakaza nokukhuthazela, ngaphandle kokuqinisa amaphaphu.
Ukugijima - ukugijima kungasiza ekuqiniseni imisipha oyisebenzisela ukuphefumula, kanye nokwenza ngcono ukuqina kwakho ngokuphelele.
Imidlalo yeqembu - imidlalo yeqembu ebandakanya ukuqhuma okufushane kokuzivocavoca umzimba, njengebhola lomnqakiswano, i-volleyball, ibhola noma ukusubatha kungaba ukukhetha okuhle ukuzama.
Ukuqhuma okufushane kokusebenza kuhle kwe-asthmatics, ngoba kungasiza ekwakheni ukuqina kwenhliziyo namaphaphu. Ukuzivocavoca ngama-bursts amafushane futhi mancane amathuba okuthi kubangele ukuhlaselwa yisifuba somoya bese ubamba iqhaza emisebenzini emide, enwetshiwe, njengokugijima kwebanga elide.
Ukuzivocavoca ngokuphepha ngesifuba somoya
Kwesinye isikhathi ukuzivocavoca umzimba kungadala ukuthi izimpawu zesifuba somoya zibe nzima. Lokhu kukholakala ukuthi kungenxa yokuthi uphefumula ngokushesha nangomlomo wakho ngenkathi uzivocavoca, nokuthi umoya ongena emaphashini akho ungabanda futhi wome kakhulu kunokujwayelekile. Kwabanye abantu, ukushintsha kwezinga lokushisa kungadala ukuthi imigwaqo yomoya inciphe, ibangele izimpawu zesifuba somoya. Enye indlela yokwehlisa ubungozi bokuvivinya i-asthma ukuqinisekisa ukuthi ufudumale kahle kusengaphambili futhi upholise impahla ngemuva kokuzivocavoca. Noma uma umoya obandayo unenkinga, zama izindlela zokuzivocavoca zasendlini esikhundleni.
Amathiphu wokuzivocavoca ngokuphepha nge-asthma:
Njalo yiba ne-reliever inhaler yakho nawe.
Qaphela izimbangela zakho ze-asthma futhi uzigweme lapho kungenzeka khona. Isibonelo, uma uthinteka impova noma ukushisa, gwema ukuzivocavoca kulezi zimo.
Uma uzivocavoca nabanye abantu, batshele ukuthi une-asthma bese uchaza ukuthi yini okufanele uyenze uma uhlaselwa yisifuba somoya.
Uma uhlangabezana nezimpawu ezifana nokuphefumula, ukuphefumula okungathulisi lapho uyeka ukunyakaza noma ukukhwehlela lapho uzivocavoca, yima uthathe i-reliever inhaler yakho.
Khumbula ukufudumala nokupholisa phansi.
Uma isimo sezulu esibandayo sisusa izimpawu zakho ze-asthma, namathela ekuzivocavoca endlini.
Nciphisa ukuzivocavoca umzimba uma unesifo segciwane, njengomkhuhlane, ngoba izifo zingenza izimpawu ze-asthma zibe zimbi kakhulu.
Uma ungabaza ukuthi yiziphi izinhlobo zokuzivocavoca ezingcono kakhulu kuwe nezimpawu zakho ze-asthma, khuluma nodokotela wakho ukuthola iseluleko.